Maamulka Ahlusunna oo Xir Xiray Odayaal Dhaqameed Sabab? – Radio Daljir
Seteembar 16, 2017 7:44 b 0
Wararka ka imaanaya Magaaladda Dhuusomareeb ee Gobalka Galgaduud ee Bartamaha Somaaliya ayaa sheegaya in Maamulka Ahlusunna ee Gobalada dhexe uu xir xiray odayaal dhaqameed la sheegay in ay la kulmeen Alshabaab.
Odayaasha la xiray ayaa la sheegay in Magaaladda Ceelbuur ay shir kula yesheen alshabaab ,tas oo keentay Maamulka Ahlusunna inuu xiro odayaashan oo gaaraya ilaa 7 odayaal dhaqameed.
Xiritaanka odayaashaas ayaa la sheegay in xiligan ay xiisad abuurtay ,waxaana wali ka hadlin xiritaanka odayaashan Maamulka Ahlusunna ee Gobaladda Dhexe ka arimiya.
Qoysaas Raashin iyo Dhar la Gaarsiyeey Degamadda Caluula (dhegayso)